२०७६ बैशाख २७ गते शुक्रबार/आजको राशिफल - SangaloKhabar
जातिय विभेद गर्नेलाई नेकपा धनकुटाले कारबाही गर्ने
भारतीय राजदुतावासद्वारा महालक्ष्मी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान
डा. सुनिल शर्माद्वारा बेवारिसे बृद्धलाई सडकबाट उठाएर निःशुल्क उपचार (भिडियोसहित)
पत्रकार रवि लामिछाने र युवराज कँडेल पक्राउ
शालिकरामको सुसाईड भिडियो सार्वजनिक: ‘रबि लामिछानेसहित तीन जनाले मर्न बाध्य पारे’ (भिडियोसहित)
सुनसरीमा श्रीमानको कुटाईबाट मृत्यु
साँगुरीगढीमा कांग्रेसले जनप्रतिनिधिलाई आरोप लगाएपछि नेकपाको आपत्ती
छातीमा गाडिएको भाटो सफलतापूर्वक निकालेर नोबेलले बचायो लक्ष्मीको ज्यान
सुबिसुको कार्यालयमा भीषण आगलागी (फोटो फिचरसहित)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले संकलन गर्यो एक करोड १३ लाख राजश्व
२०७६ बैशाख २७ गते शुक्रबार/आजको राशिफल
- उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) -नेपाली पात्रो
वि.सं. २०७६ साल वैशाख २७ गते। शुक्रबार। इश्वी सन् २०१९ मे १० तारिख। नेपाल संवत् ११३९ बछलाथ्व। वैशाख शुक्लपक्ष। तिथि– षष्ठी, २१:३२ बजेउप्रान्त सप्तमी।
हतारको निर्णयले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। बेसुरमा दिएको वचनले समस्या निम्त्याउनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। हतारको निर्णयले काम रोकिन सक्छ। अरूका लागि उपयोग भइएला। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
अग्रज तथा सहयोगी जुट्नाले सोचेको लाभ उठाउन सकिनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने पुरुषार्थी काम सम्पादन गर्दै नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नेछन्।
प्रशंसकहरू बढ्नेछन् भने शुभचिन्तकहरूले काममा सहयोग जुटाउनेछन्। विचारले धेरैलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बोलीको भरमा चिताएको काम सम्पादन गर्ने समय छ।
आकस्मिक खर्च बढ्नेछ भने आम्दानी कम हुनेछ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा दिगो काम फेला पार्न सकिनेछ। सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ। तापनि पहिलेका कमजोरी सच्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ। बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा हुने सम्भावना देखिन्छ।
दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेछन् भने मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला। साझेदारीबाट पनि फाइदा उठाउन सकिनेछ। अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। सापटी रकम फिर्ता लिन मुस्किल पर्नेछ। उपलब्धि प्राप्त गर्न केही कुरा त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ।
नयाँ कामले नाम र दाम दिलाउनेछ। कर्मक्षेत्रमा गरिएको साधना सिद्ध हुनेछ। मिहिनेतले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। व्यवसायमा सोचेको प्रगति हुनेछ। कर्मयोगले मानसम्मान समेत दिलाउन सक्छ।
परिस्थितिवश चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ। आंशिक फाइदा भए पनि सोचेको काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ। अरूका लागि केही रकम र बुद्धि खर्चनुपर्ला। अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिले अलमल्याए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक फाइदा हुनेछ। तर अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा काममा धोका हुन सक्छ।
परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा काम बन्न समय लाग्नेछ। अस्वस्थताले कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। आकस्मिक समस्याले शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। चिताएको काम बिग्रनाले निराशा छाउनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि समस्यामा परिनेछ। फजुल खर्च बढ्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुग्ने देखिन्छ।
घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन निकै रमाइलो र उत्साहवर्द्धक रहनेछ। परिस्थितिले नयाँ मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ। नयाँ परिवेशमा पुगिए पनि नयाँ साथीभाइ भेटिनेछन्। प्रेमको बन्धन कसिनेछ। साथीभाइ र सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। पहिलेको दुविधाले निर्णायक मोड लिनेछ। भौतिक सुविधा जुटाउन सकिनेछ।
चुनौती अँगाल्नुपरे पनि आँटले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू स्वयं पछि पर्नेछन् भने कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ। मिहिनेतले काममा सफलता दिलाउनेछ। समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ। रोग तथा शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा समेत जित हासिल हुनेछ।
प्रयत्न गरेका काम बिस्तारै सम्पादन हुनेछन्। अध्ययनमा सामान्य उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। काममा बाधा पुर्याउनेहरू सक्रिय हुने हुँदा सजग रहनुहोला। प्राविधिक ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। चिताएको काम पूर्ण नभए पनि फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। व्यवसायमा सोचेको धनलाभ नहुन सक्छ। सन्तान वा अनुयायीले भने काममा साथ दिनेछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २७, २०७६ समय: ८:०७:३७
धनकुटा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी धनकुटाको सचिवालय बैठकले पार्टीको कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता, पार्टी...
धनकुटा । भारतीय राजदुतावासले धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसर ...
बिराटनगर। बिराटनगरको उखर्माउलो गर्मीमा तातो सडक माथिको बसाई । रोगको व्यथा र बृद्ध अवस्थाका कारण उठ्नै नसक्दाको पीडाले कर...
काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछाने र युवराज कँडेल पक्राउ परेका छन् । न्यूज २४ का पत्रकारद्वयलाई न्युज २४ को कार्यालयबाट पक्...
धनकुटा । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्माहत्या गर्नुअघि बोलेको भिडियो सार्जजनिक भएको छ । भिडियोमा उनले चर्चित पत्रकार र...
सुनसरी । सुनसरीमा श्रीमानको कुटाईबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ । बर्जु गाउँपालिका–५ पुरानो नहर टोलका २६ बर्षीय प्रदिप यादव...
सम्पर्क- ०२६ ५२१७५०, ९८५२०६११४८ news.sangalokhabar@gmail.com